Mikasa hametraka an'i Junot Biramanana eo amin'ny fitondràna Atoa Norbert Lala R. - Vaovao farany
Home / Junot Biramanana / mafana / Norbert Lala Ratsirahonana / Mikasa hametraka an'i Junot Biramanana eo amin'ny fitondràna Atoa Norbert Lala R.
Mikasa hametraka an'i Junot Biramanana eo amin'ny fitondràna Atoa Norbert Lala R.
Iza moa no nanam-po hoe misy ifandraisany izy mirahalahy mianaka ireto? Ny harivan'ny alakamisy 12 mey lasa teo no betsaka no nilaza ho nahatsikaritra an'Atoa Norbert Lala Ratsirahonana nifanao fotoana tamin'i Junot Biramananana, ilay olo-malaza tsy fantam-piaviana izay tsy izoviana amin'ny rehetra intsony.
Teny amin'ny trano fisakafoana Buffet du Jardin eo Antaninarenina no nifampitaona izy mianaka ireto, raha nandeha taxi ville Atoa Norbert Lala dia limousine raitra be kosa no nanatitra an'i Junot. Afaka namonjy ny toerana izahay mpanao gazety satria adin'ny efatra be izao no faharetan'ny fihaonana.
Noana be hono izy...
Raha nanontany ny mpanao gazety iray tonga teo an-toerana hoe inona no dia nampaharitra ela be ny dinika nifanaovana dia namaly i Junot : "Noana be hono izy, telopolo minitra teo ihany dia vita ny resakay fa niakafo ny adiny telo sy sasany ambiny... izy no tena nisakafo fa ny ahy labiera iray vera ihany".
Nahagaga tokoa mantsy fa toa hafahafa fandeha Atoa Norbert Lala nivoaka teo nijaikojaiko namonjy taxi rehefa tsy nisy niraika taminy ny mpanao gazety, toa mahitsy lamosina be tsy afaka miondrika.
Inona no resakareo tao ry Junot ?
-- "Nilaza tamiko izy fa afaka hametraka ahy eo amin'ny fitondràna raha tiako izany, efa telo herinandro izy no nikasa ny hihaona amiko fa izao aho vao afaka mihaona aminy, avy nitondra zaza 200 avy eny ambany tanàna tany Disney Land izaho io."
Mikasa ny hitondra fanjakàna angaha ianao ry Junot ?
-- "Tsia, ary nolaviko ny tolokevitr'i zokibe Norbert Lala. I Hery nge olona mpangataka fanampiana matetika amiko e, raha miala teo izy dia tsy ho voaveriny ny vola nindraminy tamiko. Tsy te ho eo aho ka. Ny any etazonia no maro ny namporisika ahy hilatsaka, rehefa tsy nanaiky koa aho dia i Hilary Clinton no natolotra."
Tsy nifanara-kevitra izany ianareo sy Atoa Norbert Lala?
-- "Ny resaka pôlitika aloha tsy nety e, fa nangataka zavatra hafa izy ary nekeko. Manao itony vente en ligne-na friperie itony hono izy ka miangavy ahy mba hizara ny sarin'ny robe sy combishort amidiny ao amin'ny pejy Facebook-ko. Ataoko ka raha izay no mahafaly azy ary mino aho fa hahalafo entana maro izy."
Araraotina kely ry Junot a, mba nanao ahoana ny fihaonanao sy Atoa Ban Ki-Moon omaly ?
-- "Tsy tafaona izahay satria somary be shopping natao aho omaly, ary tsapako fa tena kivy izy. Rehefa ni-insiste mafy tamin'ny antso an-telefonina izy dia noraisiko vetivety ihany. Tsy nazava tamiko ny zavatra ttiany holazaina fa mandalo any an-tranony aho amin'ny herinandro."
Bonus : Sarin'i Junot sy Rihanna
Naparitak'i Rihanna tamin'ny tambazotra sosialy ity sary ity ary nahatonga azy roa niady satria sary tsy tokony havoaka hoy i Junot, izy mbola niaraka tamin'i Beyonce.
Mikasa hametraka an'i Junot Biramanana eo amin'ny fitondràna Atoa Norbert Lala R. Reviewed on mai 13, 2016 Rating: 5
Junot Biramanana X mafana X Norbert Lala Ratsirahonana